Ma xiriir baa ka dhexeeya Soomaalida iyo Oromada? - Caasimada Online
Home Warar Ma xiriir baa ka dhexeeya Soomaalida iyo Oromada?
Ma xiriir baa ka dhexeeya Soomaalida iyo Oromada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Isbuucii la soo dhaafay waxa uu dagaal dhexmaray Soomaali iyo Oromo wada degga bariga dalka Itoobiya. Dowladda ayaa sheegtay in in ka badan 50 qof lagu dilay colaadda.